हेर्नुस द,’लित घर भित्र पसेको भन्दै १२ बर्षको बालिकालाई निलडाम हुनेगरि कु,’टियो (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > हेर्नुस द,’लित घर भित्र पसेको भन्दै १२ बर्षको बालिकालाई निलडाम हुनेगरि कु,’टियो (भिडियो सहित)
admin September 13, 2020 September 13, 2020 भिडियो, समाचार, समाज	0
मोरङ । मोरङको उर्लाबारी–४ थापाडाँगीकीमा दलित १२ वर्षीया बालिका फुलसरी मंग्रान्तीलाई कु’टपि’ट गरिएको छ । कु’टपि’टबाट बालिका घाइते भएकी छिन् । फुलसरीलाई छिमेकी नन्दलाल श्रेष्ठ, उनकी पत्नी निर्मला र छोरा अम्बिरले कु’टपि’ट गरेको उनका आफन्त दुर्गाकुमारी रोकाले बताइन् । आमाबुबा बेपत्ता भएकी फुलसरीलाई दुर्गालेनै आश्रय दिइरहेकी छिन् । श्रेष्ठले दलित बालिका घरभित्र पसेको भन्दै सोमबार निर्घात कु’टपि’ट गरेका हुन् ।
कु’टपि’टबाट बालिकाको शरीरभरि नीलडाम छ । सोमबार उनी चिसो पानी लिन छिमेकी तुलसा खतिवडा श्रेष्ठको घरमा गएकी थिइन् । तुलसा नन्दलालकी बुहारी हुन् । उनीहरू अलग–अलग घरमा बस्छन् । ‘नानी (फुलसरी) सधैँ त्यो घरमा जाने र पस्ने गरेकी थिई ।
सोमबार फ्रिजमा राखेको पानी लिन पठाएँ । घरमा सानो नानी मात्र रहेछ । ऊसँगै फुलसरी पनि भित्र गइछ,’ दुर्गाले भनिन्, ‘श्रा’द्ध छ, हामीले खाना चढाएको छैन भन्दै नी’लडा’म हुनेगरि कु’टपि’ट गरे ।
त्यो घरमा त श्रा’द्ध पनि थिएन, नन्दलालको घरमा पो श्रा’द्ध थियो ।’ फुलसरीलाई छुटाएर ल्याउँदा आफूमाथि पनि कु’टपि’ट गरेको उनले बताइन् । के भनेर कुटियो त बालिकालाई ? तल भिडियोमा जस्ताको तस्तै दृश्य हेर्नुहोला ।
सामाजिक सञ्चालका बिषयलाइ लिएर सिआइवीले थाल्यो यस्तो कदम! सतर्क रहन सबैमा अनुरोध!